एमाले महाधिवेशन सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा आउने, अरू को–को नेता आउँदै ? « Janata Times
एमाले महाधिवेशन सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा आउने, अरू को–को नेता आउँदै ?
चितवन,, मंसिर ९ । नेकपा (एमाले)को १० औँ महाधिवेशनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका देउवा शुक्रबार यहाँ आएर महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो ।
अन अराइभल भिसा बन्द: हङकङसहित ९ देशबाट नेपाल आउन रोक
काठमाडौं, १६ मंसिर । सरकारले दक्षिण अफ्रिका, हङकङसहित ९ देशबाट आउने नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक